Beats By Dr.Dre – Monster Beats နဲ့ မိတ်ဆက်ခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Consumer Electronics » Beats By Dr.Dre – Monster Beats နဲ့ မိတ်ဆက်ခြင်း
Posted by Ever Golli on Apr 19, 2012 in Consumer Electronics, Steal Deal | 23 comments
Mandalay Gazette အဖွဲ့ဝင်အပေါင်းတို့ရေ.
အနော့်ရဲ့ပထမဆုံး post လေးမရေးခင်.ကိုယ်ကိုကိုယ်.နည်းနည်းလေးတော့.မိတ်ဆက်ပါရစေ..အနော်..ဂျွန်စော.ပါ..
အဲလေ..ယောင်လို့.. အနော်..Nick Name ကတော့..ပိုးဟပ်လို့.ခေါ်ပါတယ်ဗျ..ကိုယ်ကပိုးလိုက်..သူများက..
ဟပ်သွားလိုက်ပေါ့..လောလောဆယ်.နေထိုင်ရာအရပ်ကတော့.ဆင်ကျားပူမှာပါ..Mandalay Gazette ကိုဖတ်နေတာ.
Gazette မှာအဲလိုသူတချို့ရေးတဲ့စာတွေဆိုလဲဖတ်ရတာသိပ်ကြိုက်တယ်.နာမည်တပ်ပြောရရင် ကိုဖုန်းကျော်တို့.ကိုဂီ..တို့..
ရွာသူရွာသားတွေ.အပြန်လှန်ငြင်းခုံ.ရန်ဖစ်နေတာတွေတော့လဲ.သဘောကျတယ်.member လုပ်မယ်.Post လေးဘာလေးတင်.
amazon ကလှမ်းဝယ်ဖစ်တဲ့ (စ.ကြွားပီ..ဟီးဟီး)..Beats By Dr.Dre လို..လူသိများကြတဲ့.Monster HeadPhone တွေ
အကြောင်းရေးချင်လာတယ်..သူများတွေ.ရေးဘူးတာလဲ..မတွေ့မိလို့ပါ… နာမည်နဲ့ HeadPhone နဲ့မတွဲမိရင်တောင်..
ခုခေတ် . rapper တွေ (ယို့..ယို့..) လူငယ်ကောင်လေးတွေ.တပ်တပ်ထားကြတဲ့bတံဆိပ်လေးနဲ HeadPhone ကြီးကြီး
သူတို့ရဲ့မွေးသမိခင်..အဲလေ.မွေးသဖခင်..လို့ပဲသုံးရမလား..နာမည်ကြီး Rap အဆိုတော် သီချင်းရေးသူ ထုတ်လုပ်သူ
ညွှန်းထားတာတော့..အနုပညာရှင်တွေ.ထုတ်လုပ်သူတွေဟာ. Studio ထဲမှာ…အဟွာပြဲမတတ်.. ပရိတ်သတ်အတွက်.
သီချင်းတွေရဲ့ သံစဉ်တွေ Beat တွေကို..တော်ယုံ HeadPhone တွေက. တိတိကျကျ.ကြားရအောင်..handle မလုပ်ပေးနိုင်
ဘူးဆိုပဲ ( So Sad, ငွေကုန်ပေါက်) အဲ့တော့.သူတို့ဖန်တီးထားတဲ့. စည်းချက်တွေတိုင်း.ပြတ်ပြတ်သားသားကြားရဖို့အတွက်
ဟော့ဒီ..Beat HeadPhone က..တာဝန်ယူပါမယ်.၀ယ်ပါဘာညာပေါ့..(Beat တွေကြားရဖို့အတွက်သူရို့.တာဝန်ယူတယ်.
Beat Head Phone တွေကိုအကြမ်းဖျင်း Over-Ear နဲ့ In-Ear ဆိုပီးနှစ်မျိုးခွဲခြားလို့ရပါတယ်.Over-Ear Type တွေကတော့
Studio S$699 ,Pro S$820, Solo S$420, Solo HD S$490 စသဖင့်ပေါ့ In-Ear တွေကတော့.
Tour S$399,iBeats S$210,PowerBeats S$349 စသဖင့်တို့..ရှိပါတယ်..နာမည်ကြီး Celebrity Name တွေနဲ့လဲ
တွဲထုတ်တားတွေလဲရှိပါတယ်.justin bieber အတွက်တို့ ladyပလာတာ..အတွက်တို့ diddy အတွက်တို့စသဖင့်ပေါ့ခင်ညာ.
အထက်ပါဈေးနှုန်းတွေကတော့..SG က Official Web Site ကဈေးနှုန်းတွေပါ..apple store မှာဝယ်ရင်.အဲ့ထက်.
နည်းနည်းလေးသက်သာပါတယ်.Local Retailer တွေမှာ.၀ယ်ခဲ့ရင်တော့.တနှစ်အတွင်းတခုပျက်ရင်တခုလဲပေးပါတယ်..
အဲဒါကြောင့်လဲ. US ကဈေးထက်.တ၀က်နီးပါးလောက်ကို.ပိုဈေးကြီးနေပါတယ်.အနော်ကတော့.လိုချင်လွန်းလွန်းလို့..
Solo HD ၀ယ်ဖစ်ပါတယ်. US Amazon ကလှမ်းမှာဖစ်ပါတယ်..199 $ ပဲပေးရပါတယ်..စလုံးငွေနဲ့ဆိုရင်..260 လောက်ပဲ
ကျပါတယ်.စလုံးမှာ.၀ယ်ရင်..490 ဆိုတော့..230 လောက်ကိုကွာတာပါ..brand ယုံတာကြောင့်ရယ်..ပိုက်ပိုက်ချွေတာချင်
နည်းနည်းထူးခြားတာလေးတွေကတော့.ခုနောက်ပိုင်း Wireless version ပါရနိုင်ပီး.အဲဒါကိုတော့ US site မှာပဲတွေ့ရပါတယ်..
Studio ရယ် အဲ့. Wireless ရယ်က..ဓတ်ခဲ.ထည့်သုံးရပါတယ်..နောက်သဘောကျမိတာတခုက..Limited Edition လို့
ဆိုတဲ့ Gold And Black အတွဲစပ် Color နဲ့ဟာကတော့..ထူးထူးခြားခြား apple store မှာပဲရနိုင်ပါတယ်..Limited Edition
ဆိုပေမဲ့..ခုထက်ထိ..မကုန်နိုင်သေးတာလဲ..အံသြဘနန်း..ဖစ်မိပါဒယ်.. HeadPhone လဲဝယ်ရင်း ကုသိုလ်လဲပြုချင်တယ်ဆို
ရင်တော့ Red Color Version ကိုရွေးဝယ်နိုင်ပါတယ်..ပေးလိုက်ရတဲ့..ပိုက်ပိုက်ထဲကတချို့တ၀က်ကို.. HIV/AIDS လူနာတွေ
နောက်တခုပြောပြချင်တာက..ကိုယ်ဝယ်တော့မဲ့ Beats ဟာ အစစ်ဟုတ်မဟုတ်လဲ..Official site မှာ..
၀င်စစ်လို့ရနေပါပီ..Beats တွေရဲ့ဘယ်ဘယ်နားကျပ်အပေါ်နားလေးမှာ Serial No ပါပီး..အဲ့ဒါကို..
နာမည်ကြီးသလောက်လဲ..သုံးကြည့်တဲ့အခါ.တကယ်ကို.ကောင်းမွန်ပါတယ်..ပြင်ပက noise တွေဝင်မလာအောင်..
ဈေးကြီးတာပါ.အဲ့ဒါကြောင့်လဲ.တသွေမတိမ်းဆင်လှတဲ့.OEM လို့ခေါ်ကြတဲ့(Original Equipment Manufacture)
Version တွေ.ပေါခြင်းသောခြင်းကိုထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်.Gmarket တို့လို့မျိုး Site တွေကနေဈေးသက်သာစွာနဲ့
Beats တွေဟာ..Apple Product တွေနဲ့..တွဲသုံးဖို့..ရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်ပီး..အဲ့လိုသုံးဖို့အတွက်လဲ..Control Talk ပါတဲ့
ကြိုးတချောင်း..ရိုးရိုး cable တချောင်း..နှစ်ချောင်းထည့်ပေးထားပါတယ်..အဲ့ Cable တွေကနေ အသံတိုးကျယ်ရှေ့တိုး
linkin park ရဲ့ points of authority ကိုနားထောင်ရတာ..ဘာနဲ့မှ.မလဲနိုင်အောင်
ဖစ်နေကြောင်း.(ခံစားချက်လေးက..ရှိနေသကိုးးး..ငိုချင်ထှာာာာ ;( ) လဲ.ပြောပြချင်မိပါတယ်..“
တကယ်လို့များ headphone ကောင်းကောင်းဝယ်မယ်ဆိုရင်..Quality လဲတကယ်လဲကောင်းမွန်တယ်.၀ယ်သင့်တယ်.
ဆိုတာလေး.သတင်းပေးလိုက်ရပါတယ်..Official web site ဖြစ်တဲ့ http://beatsbydre.com/ မှာ..
မူလလက်ဟောင်း အသည်းကွဲသမားလေး PoeHarpp ;)
About Ever Golli
Ever Golli has written 1 post in this Website..
View all posts by Ever Golli →
လူထဲဝင်တဲ့..ဒွာရအပေါက်တွေထဲ.. တခြားအပေါက်တွေအတွက်.. လူတွေကတော်တော်အာရုံစိုက်ပြီး.. ကောင်းအောင်လုပ်ကြပေမဲ့.. နား(အကြား)ကိုတော့ သိပ်မလုပ်ကြသလိုပဲ..
ဒွာရ ခြောက်ပါး= မြင်ခြင်း၊ ကြားခြင်း၊ နံခြင်း၊ အရသာရှိခြင်း၊ ထိခြင်း၊ သိခြင်း
အခုမှာတော့… တော်တော်စိတ်တိုင်းကျလေး.. ရေးပြထားတယ်ပေါ့..
စပီကာထုတ်တဲ့. Harman International ကအင်ဂျင်နီယာတယောက်နဲ့.. စကားပြောဖူးတယ်.
သူကတော့.. အကောင်းဆုံးစပိကာဆိုတာ.. အသံကစပီကာ ကနေလာနေတယ်မထင်ရပဲ.. သဘာဝအတိုင်းအပြင်မှာကြားနေသလို..ဖြစ်ရတာတဲ့..
Beats By Dr.Dre ဝယ်ဖို့
ဟဲ့လူကြီး ဝယ်မယ်ဆို မှာပေးနော်
ပိုက်ဆံတော့ လုမပေးနဲ့ သူကြီးတူမ ကျွန်တော်ချစ်ချစ်နဲ့ တိုင်ပြောမှာ
အဲဒီဟတ်ဖုန်းဆိုတာ လေဒီယိုနဲ့နားထောင်ရင်ကော ရှယ်ဘိထ် ထွက်လားခင်ည
အဲဒီတံဆိပ်မှာ Bluetooth နဲ့ချိတ်ပြီး ဖုန်းဖြေလို့ရတဲ့ မော်ဒယ်ရှိပါသလား၊ iPhone4နဲ့သုံးချင်လို့ပါ…
နောက်တစ်ခုက သိပ်ပြီးတော့ ပြူးပြဲမနေပဲ ခပ်သေးသေး၊ in Ear ကျတော့ စက်ဘီးစီးရင် နားထောင်ရင် ကားတိုက်နိုင်လို့ပါ…
အနော်ပြောတဲ့..wireless version က bluetooth နဲ့ပါဗျ..Beats ကထုတ်တဲ့
အထဲ..အဲ့တခုပဲwireless ရှိတယ်.Solo HD နဲ့ဆင်တယ်.သေးသေးလေးတော့
ဟီးဟီး..Beats တွေအကုန်လုံးနီးပါးမှာ Control Talk Cable ပါတယ်.
အဲ့Cableတွေက..Apple product တွေအတွက်ပါ..သီချင်းနားထောင်နေတုံး
အကုန်ရပါတယ်.အနော်.Samsung Galaxy SII နဲ့စမ်းကြည့်တာတော့..
Play and Stop ကလွဲပီး.မရပါဘူး..အခု wireless မှာလဲ.အဲ့ Features ပါပါတယ်.
နားကျပ်ပေါ်ကခလုတ်လေးတွေ.တိန်.တိန်..ဆိုပီးနှိပ်ယုံပါပဲ…Wireless type မို့တော
့Battery သုံးရပါတယ်..Rechargeable USB battery ပါပါတယ်လို့ပြောပါတယ်.
ဈေးနှုန်းကတော့..$279.95 ပါ…US site မှာပဲ..အဲ့ဒါကြေငြာထားတာ
တွေ့ရပါတယ်..လောလောဆယ်ကတော့ out of stock လို့ပြနေတယ်.
လိုချင်ရင်တော့..တခြား Retailer တွေမှာ..၀ယ်လို့ရပါတယ်..
I have one that is “ made in china ” ! But quality is good !
linkin park ရဲ့ points of authority ကိုနားထောင်ရတာ..ဘာနဲ့မှ.မလဲနိုင်အောင် ဖြစ်နေကြောင်း………. အားကျပါတယ်ဗျာ…သို့ပေမဲ့ ဟတ်ဆက်အပြင် ဖုန်းကောင်းကောင်း၊ ပလေယာကောင်းကောင်းလည်း ရှိမှ အဆင်ပြေမှာဆိုတော့….။ နောက်ပီး ကျွန်တော်တို့ အိမ်အပြန်လမ်းကလည်း ဘတ်စ်ကားတိုးရတာ ဆိုတော့ မလွယ်သေးပါဘူးဗျာ။
ထမင်းဘူးလေးကိုင်..MICT ထဲ.အလုပ်သွားဖို့..၃၅ ကားကျပ်ကျပ်ကို..
ar jar ar jar fighting
In-Ear type တွေက..သေးတယ်လေဗျာ..Bass အသံထွက်တွေကလဲ..
ကောင်းမှကောင်း..Justin Bieber Beats လေးဆို..မမိုက်ဘူးလား..
ကြိုက်လောက်ဒယ်..း) အနော်လဲ.. R&B ကြိုက်ပါ့ဗျာ..ခုတလော..
ရင်ထဲ..ညိနေတာ.. R Kelly ရဲ့ Radio Message သီချင်းရယ်..
Jordin Sparks ရဲ့ Tattoo သီချင်းရယ်ဗျ..အလွမ်းဓတ်ခံလေးလဲ..
ခုလို ညွှန်ပေးတာကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နားဆေးရုံရောက်ပြီးထဲက မနောတို့ကတော့ HeadPhone လက်ဆောင်ပေးတဲ့သူရှိတာတောင် နားမထောင်ဖြစ်တော့ပါဘူး။ နားအကြား အာရုံမကောင်းတော့ ဆေးရုံသွား လူတန်းစီ ဆရာဝန်ဟောက်တာခံရနောက် ခွဲမယ် ဘာမယ်ပြောတော့ ကြောက်လန့်တကြားနဲ့ ပေးတဲ့ဆေးတွေ စွတ်သောက်နဲ့ အရမ်းစိတ်နာလို့ ခုတော့ ဘာနားကြပ်နဲ့မှ နားမထောင်ဖြစ်တော့တာ အတော်ကြာလှပါပြီရှင်…
Beats by Dr. Dre Beats Solo HD Black On-ear Headphones with ControlTalk for $166.17 + FS!
အမေဇုံလည်း မသိ၊ ယောက္ခမဇုံလည်း မရှိ၊ ဒီမှာတော့ တရုတ်စက် တရက်စုတ်နဲ့ပဲ မစုတ်မချင်း နှစ်ပါးသွားနေရပါကြောင်း။
နားကြပ်တွေမှာ အော်ဒီရို တက်ကနီကာကိုဘဲအကောင်းဆုံးလုဎ်ပြီးသုံးဘူးတယ် ပန်းသီးနားကြပ်လဲဈေးကောင်းသလိုအရည်အသွေးရှိတာ
တွေ့ရတယ် နောက်တခါဝယ်မှစမ်းကြည့်ဦးမယ် ကျေးဇူးပါ ဖုံးရဲ့ အန်ဒိုရီ ဒေါင်းလုဒ်ထဲမှာတွေ့မိသား အခုမှရှင်းသွားတယ် အွန်လိုင်း
ဒီမှာက ဘစ်ကား တိုးစီးရတာဆိုတော့ နားကြပ်ကြီးနဲ့ ဆို စပယ်ရာများပါစပ်က ပိုပိုပြဲလာလို့ ရှိနေတဲ့ ဟာတောင် နားထောင်ဖို့ ခုန်နေရာ ရမှပဲ အဆင်ပြေတာမလား ။ အဲလောက်ကြီးကြီး သာဆို အလွယ်ဘူးဗျာရေ ။ လိုချင်တာတော့ ပြောမနေနဲ့ မှာရင်သာ ပို့ပေးရမယ်နော်။
amazon ကဝယ်ချင်ါလို့ ဝယ်ပေးလို့ရလာခင်ဗျ ကိုပိုးဟတ်
စစချင်းမှာပဲ ပွဲစားလား ဘာလားတော့တော့ မသိ ကော်မရှင်စားနဲ့တူပါတယ်။ ကြေငြာတွေဝင်နေလိုက်တာ
မ၀ယ်နိုင်တာတွေ မပြောပါနဲ့ ရွာသူရွာသားတွေကို ၀ယ်ပြီး လက်ဆောင်ပေးမယ်ဆို ဟုတ်တုတ်တုတ်ရှင့်….
headphone တွေသုံးဖို့ အသက်အရွယ် ကန့်သန့်ချက်ရော၇ှိလားမသိဘူးနော် သိသလောက်တော့ မတွေ့မိလို့
ဥပမာ- ဘယ်နှစ် နှစ်အောက် ကလေးတွေသုံးမယ်ဆိုရင် အကြားအာရုံထိခိုက်စေနိုင်သည်တို့ ဘာတို့ပေါ့လေ